Waa kee xidigga uu Taleefanka kula xiriiray Cristiano Ronaldo una sheegay inuu Juventus ku soo biiro ? – Gool FM
Muxuu ka yiri Zinedine Zidane guuldarradii ay xalay kala kulmeen Real Mallorca??
Waa kee xidigga uu Taleefanka kula xiriiray Cristiano Ronaldo una sheegay inuu Juventus ku soo biiro ?
Haaruun February 4, 2019
(Madrid) 04 Feb 2019 Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Juventus iyo xulka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa lagu warramayaa in uu taleefoon kula xiriiray xidigga kooxda Bayern Munich ee Jarmalka James Rodriguez.
Wargeyska ‘Marca’ ee ka soo baxa Spain ayaa qoray saakay in CR7 uu la xiriiray laacibka Colombia James, uguna baaqay inuu ku soo biiro Juventus, waxaana James qudhiisu uu mar hore u sheegay Bayern Munich in uusan qorshaha ugu jirin in uu kooxdaasi la sii joogo, sida wargeysku qorayo.
James ayaa laba sanadood oo amaah ah ugu ciyaaraya Bayern isagoo ka soo tegay naadigiisii hore ee Real Madrid 2017-kii, waxaana Juventus oo si aad ah u danaynaysa Rodriguez ay u adeeeegsanaysaa Ronaldo innnuu ku qanciyooo laacibkaasi ay Real Madrid ka soo wada ciyaareen inuu yimaado Torino.
Hadda go’aanka waxaa iska leh Bayern Munich oo haddii ay doonayso heshiis dheer oo rasmi ah la saxiixan karta James, haddii kalena fasixi karta.
WARKII HORE WAR SOO DHAAF: Sarri oo qaab ciyaareedka Liita ee Jorginho ku eedeeyay xiddigaha kale ee kooxda...(Muxuu yiri??!!)
“Qaab ciyaareedka cajiibka uu sameenayo Rashford, waxay muujineysaa sida uu fashil u yahay Mourinho”
Barcelona oo isku diyaarineysa in dalab soo jiidasho leh ay ka gudbiso Neymar Jr bisha Janaayo